Vaovao - Ny orinasanay dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana ny fampirantiana sy fametahana famehezana any Shanghai
Ny orinasanay dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana ny fampirantiana iraisam-pirenena momba ny Shanghai sy ny famehezana
Ny orinasanay dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana momba ny fametahana adiresy sy famehezana Shanghai natao tao amin'ny Shanghai New International Expo Center tamin'ny 16-18 septambra 2020.
Betsaka ny mpampiranty amin'ity fampirantiana ity ary masiaka ny fifaninanana. Nanofa efitrano fampirantiana manodidina ny 40 metatra toradroa ny orinasa ary nitondra vokatra 4, dia ny milina famenoana, ny milina fanaovan-gazety, ny mixer planetary roa ary ny milina fanaparitahana mahery vaika. Ny milina famenoana nasehonay tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy mitovy amin'ny an'ny orinasa hafa. Ny milina famenoantsika dia mizara ho fantsona tokana sy fantsona roa. Ny fahamendrehana famenoana dia avo lenta ary mety amin'ny glues amin'ny viscosity isan-karazany. Ny orinasa hafa dia mampiasa famenoana rambony, ny orinasanay dia namolavola haitao tsy manam-paharoa famenoana loha, famenoana ny lakaoly. Izy io dia misoroka amin'ny fomba mahomby ireo bolongan'ny rivotra vaovao mandritra ny dingan'ny famenoana. Ny haben'ny fantsona misy fantsona famenoana fantsona roa dia azo ahitsy arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Ny fantsona tokana sy ny fantsona roa dia fenoina mitsivalana, izay mamaha ny olan'ny fifangaroan'ny rivotra sy ny safo-drano amin'ny famenoana mitsangana, ary tena mety ny fandidiana.
Rehefa afaka telo andro ny fampirantiana dia nahazo baiko 12 ny orinasanay ary nahatratra ny fikasana fiaraha-miasa amin'ny orinasa mihoatra ny 30. Hatsarao ny fahitan'ny orinasa ny faritry ny indostria ambony sy ambany, ary mametraka fototra mafy orina ho an'ny fampandrosoana bebe kokoa an'ny orinasa.
Mandritra izany fotoana izany dia nandany vola be foana ny orinasanay tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny haitao. Ity fampirantiana ity koa dia nanamafy ny fahavononan'ny orinasanay amin'ny fikarohana sy fampandrosoana amin'ny haitao. Amin'ny ho avy, hiatrika ny tsena isika ary hampiasa ny haitao ho antoka hanomezana ny mpanjifa vokatra avo lenta kokoa miaraka amin'ny vidiny mirary sy ny fampandehanan-draharaha mahomby, hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa ambony sy ambany miaraka amina hetsika azo ampiharina.